Mashandisiro ekushandisa HomePod isina kubatana kweWiFi | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa HomePod isina kubatana kweWiFi
Iyo HomePod mutauri akangwara, uye nekudaro inoda internet yekubatanidza kuburikidza neWiFi kuti ikwanise kuita ese mabasa ayo anoreva izvi, kubva pakuridza Apple Music kuteerera kumaPodcasts kana kutsvaga nhau kana mamiriro ekunze painternet. Asi chimwe chinhu icho vazhinji vasingazive ndechekuti iwe unogona kuchishandisa semutauri usina kubatanidzwa kune chero WiFi.
Kutora HomePod kunzvimbo isina internet kubatana uye kunakidzwa nemumhanzi nehunhu hwese uhwo mutauri weApple waanogona kutipa zvinogoneka, zvakare zvakareruka kuita, hapana chikonzero chechitatu-bato maapplication kana chero mhando yeupenzi hunyengeri. Iyo sarudzo iyo Apple pachayo inotipa uye iyo yatinokutsanangurira iwe muvhidhiyo uye mune inotevera chinyorwa.
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kumisikidza yedu HomePod kuti chero munhu agone kuiwana, zvinodikanwa zvinodiwa kuti ukwanise kuishandisa pasina kubatana kweWiFi. Kuti tiite izvi, isu tinovhura iyo Yekushandisa application, inova iyo iyo HomePod marongero ari, uye tinya pane imba icon mukona yekumusoro kuruboshwe kona, kusarudza iyo "Kumba Zvirongwa" sarudzo mune iyo menyu yatinofunga nezvayo. Kana izvo zvapera, isu tinosarudza imba iriko yedu HomePod, uye isu tinodzika pasi kuburikidza nesarudzo dzatakapihwa kusvika "Bvumira kupinda kune maspika" (Kubva paIOS 12.2 ichave iri "Vatauri neTerevhizheni").
Ichi chikamu chatinofanira kupa mukana kune "Wese", asi usazvidya moyo, nekuti kana uchida iwe unogona kudzora iko kuwana kuburikidza ne password kuitira kuti kwete chero munhu anokwanisa kuwana yako HomePod. Kubva ikozvino zvichienda mberi, unogona kushandisa yako HomePod pasina kukosha kweWiFi yekubatanidza. Iwe unongofanirwa kushandisa iyo yekutamba app pane yako iPhone kana iPad, tinya icon yeAirPlay kuti uitumire iyo HomePod, uye iwe uchaona kuti kunyangwe usina WiFi mutauri achaonekwa pakati pesarudzo. Ehe, mimhanzi inopfuudzwa kuburikidza neWiFi "peer kune vezera", zvekuti kunyangwe iyo netiweki yeWiFi isingadiwe, unofanirwa kunge uine WiFi inoshanda pane yako iPhone kana iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa HomePod isina kubatana kweWiFi
Mhoro! Ini nguva pfupi yadarika ndakatenga Mini Home pod uye vhiki ino ndakaenda nayo kuimba yechipiri ndisina kuwana, kunyangwe nhanho dzese dzaunotaura, kuti iphone inogona kuendesa chero chinhu isina Airplay. Iwe unoziva chii chingadai chakakundikana?
KANA MUIMBI UNOGONA KUDUDZWA KUDZIDZA NOMUDZIMAI; ASI ZVIDZIDZO ZVINOFANIRA KUSANGANISWA KUNA ROUTER (KUNE KANA ROUTER ISINA INTERNET, ZVINOFANIRA KUTAURA KUSANGANISIRA PAKATI PEMA
HOMEPOD MINI NEI IPHONE. BY KANA UYE MUMWE MUMWE NEUMWE ASINGATAMISE; HAKUFANANE NOKUSHANDISA AIRDROP
IOS 3 beta 12.2 inogonesa boka reFaceTime kufona zvakare
Apple inotangisa mavhidhiyo mana matsva anotarisana neiyo iPhone nemifananidzo